« Mitaky trosa » -
AccueilTresaka« Mitaky trosa »
13/02/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsindrian-daona mihitsy ny ankamaroan’ny malagasy hiandry izany firesahana mivantana amin’ingahy Andry Rajoelina izany. Fotoana iray mba hiresahan’ny olona mivantana ny fahasahiranana navelan-dRajoelina ho an’ireo namono tena ho azy tamin’ireny fanonganam-panjakana nataony ireny mantsy io.
Andro iray toa zato tokoa io ho an’ireny andian’olona nizaka ny tsy eran’ny aina ireny. Nanempoka tany Paris tany foana mantsy ry Andry Rajoelina nandritra izay efa-taona mahery izay, ka zara aza izy manome fotoana malalaka hifampiresahana.
Tsy mba dongadonga toa azy tokoa mantsy ireo very fananana sy very vady aman-janaka, ary very asa noho ny fanonganam-panjakana izay nataony.
Soa ihany tokoa fa nisy ny filoha Hery Rajaonarimampianina nanarina ny fahapotehana teto navelan-dRajoelina sy ny ekipany. Tao anatin’izay fotoana nitondrany izay, dia orinasa maro no tafatsangana. Niverina nianatra ny zanak’ireo tsy mba afaka nampiditra ny zanany an-tsekoly noho ny krizy nambolen-dry Rajoelina. Mbola hadinina amin-dRajoelina avokoa aloha izany rehetra izany mialohan’ny hiresahany an’ilay “copie coller” IEM iny. Azo sary an-tsaina mantsy fa tsy maintsy hiresaka an’iny dinidinika nahamenatra ny Malagasy iny koa izy. Tsorina anefa fa tetikasa poakaty sy nalain-tahaka be fahatany tamin’ny fandaharan’asam-bazaha tany izy iny. Jereo fotsiny ny “logo” an’ilay izy fa dia nalaina tahaka tamin’ny “logo” an’ny “Celtic healthcare”.
Faharoa manaraka izay dia tetikasa tsy manome hasina ny manam-pahaizana malagasy mihitsy, satria dia tsy nomeny lanja izy ireo. Lany tamingana angaha ny olomanga malagasy no ireny vazaha mena sofina tsy mahafantatra an’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy ireny no antsoina hanome lesona ho azy?
Fotoana iray hitakian’ireo nampitondrain-dRajoelina takaitra ny trosany io fotoana lazainy fa hihaonany sy hifampiresahany amin’ny vahoaka malagasy io. Raha tsy hoe angaha hihemotra amin’ny ora farany indray izy rehefa mahita fa ho avy ireo vahoaka madinika nataony tohatra tamin’ny fanonganam-panjakana nataony mba hahazoany fahefana.
Mazava be ny anton’ny tsy nivoahan-dRajoelina tamin’ny haino aman-jery nandritra izay aman-taonany izay. Matahotra ny vahoaka madinika nataony fitaovana sao hitaky ny trosany aminy izy. Tsy ny haino aman-jery no tsy hananany fa ny tahotra no betsaka.
Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nandresy lahatra mpandraharaha sinoa maro